Kusolwa umbango wendlu bedutshulwa - Ilanga News
Home Izindaba Kusolwa umbango wendlu bedutshulwa
Kusolwa umbango wendlu bedutshulwa
Amaphoyisa aphenya ngokufa kowesilisa nendodana yakhe
UZAME ukulutha abafi ngokuzenza iphoyisa owesilisa odubule, wabulala owesilisa nendodana ya-khe entathakusa yangoLwesibili ekuseni, kwaG, KwaMashu, okuso-lwa ukuthi ubabulale ngenxa yo-mbango wendlu.
UMnu Aneliswa “Anele” Zama (30) nendodana yakhe, uMpilo Zama (9), badutshulwe babulawa ngowesilisa okusolwa ukuthi uya-ziwa endaweni.
Ilungu lomndeni ebelikhona kwenzeka lesi sigameko esingeke silidalule ukulivikela elisindiswe wukucasha ngaphansi kombhede, elikhulume naleli phephandaba livevezela ngenxa yovalo, lithi be-kungabo-02h00 ekuseni, ngesikha-thi kuzwakala umuntu obengqo-ngqoza.
“Besilele sobathathu endlini, sa-phaphanyiswa ngumuntu obengqongqoza emnyango eshaya kakhulu isicabha. U-Anele uvukile wabuza ukuthi ngubani. Lo muntu uphe-ndule ngokuthi uyiphoyisa, ucela simvulele.
“Siphendule ngokuthi kalikho iphoyisa elihamba lodwa uma liya emzini womuntu futhi kawahambi ngezinyawo ngoba besesilunguzile ngewindi, sabona ukuthi uhamba yedwa.
“Yilapho eqale khona wakhahlela isicabha, esishaya nangesibhamu, esiphoqa ukuba sivule. Sigcine sivulekile isicabha wangena engazifihlile ubuso.
“U-Anele nguyena obeme eduze komnyango, kuthe uma kungena umbulali, ngamuzwa ekhuluma naye ethi kanti nguwena lo makhe-lwane.
“Uqede ukusho lokho, kwaqhuma isibhamu siphindelela. Ngale-so sikhathi besengicashe ngaphansi kombhede. Uqede ukudubula u-Anele waphenya embhedeni, wathola ukuthi kulele indodana yakhe, wayidubula kabili ekhanda emuva kwalokho waphuma waha-mba engathathanga lutho,” kusho leli lungu lomndeni.
Ngesikhathi ILANGA lihambele lomndeni lixoxe nonina kamufi, uNkk Thabisile Zama (62), olitshe-le ukuthi indodana yakhe ibihlala yodwa kule ndlu efele kuyona, umzukulu wakhe ubefika ngokuvakasha.
Uthi ibulawa nje, bese kuke kwafika abantu izikhathi ezintathu beyohlasela ngenxa yombango wale ndlu ebihlala kuyona.
“Le ndlu abehlala kuyona sayinikwa yikomidi lomphakathi eminyakeni ewu-10 edlule. Umni-kazi wayo washisa eyami nayo yo-nke impahla eyayiphakathi.
“Ikomidi lomphakathi laba nomhlangano, kwaxoxwa, kwavunyelwana ngokuthi ngingalivuli icala, kodwa umsolwa makanginike le ndlu yakhe enamakamelo amabili obekuhlala kuyona u-Anele.
“Selokhu ikomidi lasinika yona, bengingakaze ngihlale kuyona. Umnikazi wayo wayetshelwe ukuthi makalungise umuzi wami, akhokhe nezimpahla zami ezasha ngaphambi kokuba athole indlu yakhe.
“Wazivumela naye ukuthi uzowulungisa. Kwathi uma esethole ima-li yakhe emsebenzini, wayidla wa-yiqeda, wangawukhokha umuzi wami. Kwathi uma esephelelwe yimali, wabuya wazohlupha thina, ethi usefuna ukuyidayisa indlu yakhe, esabisa nendodana yami ethi uma ingaphumi izoyikhotha imbenge yomile,” kusho uNkk Zama.
ILANGA lithole ukuthi umnikazi wale ndlu washisa ekaNkk Zama ngoba wayexabene nentombi yakhe, ezitshela ukuthi ilele kwaZama, ethi ushisa yona kanti kayikho khona.
Imizamo yokuthola ikhansela lendawo, uHappy Mkhize iphu-nzile njengoba ucingo lwalo belukhala lungabanjwa.
Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uCol Thembeka Mbhele, uthe amaphoyisa avule amacala amabili okubulala, bekungakaboshwa muntu.
Previous articleUkhuza ukwenziwa ihlazo kokhuvethe
Next article22 August 2021